Wararka Maanta: Isniin, Jun 3 , 2013-Dibadbaxyo lagu Dalbanayo in Maxaabiista Xabsiyada Itoobiya ku jira lasii daayo oo ka dhacay Addis Ababa (SAWIRRO)
Bannaabaxayaahan ayaa dibadbaxooda ka billaabay xaafadaha Arat Kilo iyo Piazza ka hor intii aysan kusoo ururin barxadda weyn ee Churchill iyadoo ku dhawaaqayay erayo ku dalbanayaan in suxufiyiinta iyo dadka siyaasadda u xirxiran lasii daayo.
Dibadbaxayaasha ayaa waxay wateen boorar ay ku qoran yihiin erayo ay ka mid ahaayeen ‘Cadaalad…Cadaalad…Cadaalad” iyo kuwo kale oo ay ka mid ahaayeen “Waxaan ku baaqaynaa in la xushmeeyo dastuurka”.
Tiro yar oo booliis ah oo goobta ku sugnaa ayaa waxay iska daawanayeen dadka dibadbaxyada dhigayay, iyadoo aysan jirin wax rabashado ah oo weli dhexmaray bannaabaxayaasha iyo ciidamada ammaanka.
“Waxaan dowladda weydiisanaynaa inay xabsiyada laga sii-daayo dadka u xir-xiran siyaasadda, suxufiyiinta iyo kuwa weydiistay xukuumadda inaysan soo faragelin diimaha,” ayuu yiri Yilekal Getachew oo ah xubnihii dibadbaxa soo abaabulay.
Sidoo kale, Getachew wuxuu sheegay in dibadbaxayaashu ay dalbanayaan in wax laga qabto shaqo la’aanta jirta, sicir-bararka iyo musuqmaasuqa ka jira dalka Itoobiya.
“Haddii xukuumaddu ay xallin weydo waydiimaheenna ayna horumar ka sameyn weydo muddo saddex bilood gudahdoo ah, waxaan abaabulaynaa dibadbax weyn oo aan ku billaabayno halgalkeenna,” ayuu Getachew mar kale u sheegay warbaahinta.
Mas’uuliyiinta dowladda Itoobiya ayaan wax jawaab ah weli ka bixin hadalka kasoo yeeray dadka dibadbaxa dhigayay, iyadoo dibadbaxan lagu sheegay kii ugu weynaa ee dalka Itoobiya ka dhaca tan iyo sannadkii 2005 oo dibad-baxyo la dhigay lagu dilay 200-qof.
Dalka Itoobiya oo la sheegay inuu ka mid yahay dalalka Afrika ee dhaqaale ahaan sare u socda ayaa waxaa weli ka taagan dhibaatooyin ka dhan ah xuququulul aadanaha, mucaaradka oo la codkooda aan la maqal iyo weliba in la xiro cid walba oo xukuumadda kasoo horjeesatay.
Ururka difaaca xuquuqda suxufiyiinta caalamka ee CPJ ayaa sheegay in 10 suxufi ay ku xiran yihiin dalka Itoobiya, kuwaasoo xarigooda loo cuskaday sharciga la dagaalanka argagaxisada. Iyadoo dalka Itoobiya uu yahay dalka keliya caalamka ee inta badan ay cabsi awgeed suxufiyiintiisa uga carareen.
Dadka siyaasadaha taxliiliya ayaa sheegay in dibadbaxan uu muujinayo in ra’iisul wasaaraha dalka Itoobiya Hailamariam Desalign uu xagga xukunka ka wanaagsan yahay ra’iisul wasaarihii uu bedelay ee Males Zenawi oo lagu sheegi jiray inuu yahay nin xukunkiisu adag yahay.